Yini ongayibona eLyon | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | EFrance, Iziqondiso
EFrance Inezindawo eziningi ezinhle futhi akufanele ushiywe wedwa neParis. Isibonelo, elinye idolobha elinomlando omningi yi Lyon. Ngaphezu kwalokho, idolobha lesithathu elinabantu abaningi eFrance futhi belijwayele ukuba yinhloko dolobha yaseGaul ngezikhathi zokubusa kwamaRoma.
ILyon inakho konke, umlando, ukwakheka kwezakhiwo, izakhiwo, ama-vibes aseyunivesithi kanye ne-gastronomy engeza ezikhangayo zayo ngokunambitheka okuningi. Ake sibone namuhla ongakuvakashela eLyon ukuze lo muzi ungalibaleki nakancane.
2 Ukuvakasha kweLyon
Kuyinto empumalanga yeFrance, lapho okuhlangana khona imifula iSaone neRhone, phakathi kwezintaba namathafa. Bekuyi eyasungulwa amaRoma ngo-43 BC, enqabeni endala yamaCelt. Ababusi ababili baseRoma, uClaudius noCaracalla, babezozalelwa lapha.
Phakathi neNkathi Ephakathi ukusondela e-Italy kwayenza yachuma, ikakhulukazi ezikhathini zanamuhla ngosizo lwamabhange aseFlorentine, ubudlelwane bezentengiselwano neJalimane, ukuba khona kwemishini yokunyathelisa eminingana futhi ngokuyisisekelo ukuhweba ngosilika. Kusukela esandleni sikasilika, ngokunembile, bekungabona ubukhazikhazi obusha ngekhulu leshumi nesishiyagalolunye.
Kuthathwe amaJalimane ngezikhathi zeMpi Yesibili, ukumelana nakho kwaba nezenzo eziningi. Ngemuva kokuphela kwempi nokubuyiswa kweFrance, iLyon yaqala ukwenza isimanje ngokwakhiwa kabusha kwezakhiwo zayo eziqhunyiswe ngamabhomu futhi, ngokwesibonelo, ukwakhiwa kwemetro ngeminyaka yama-70.
Ngalo mlando omude akunakwenzeka ukuthi idolobha alinazo izindawo ezinhle nezihehayo zezivakashi. Ngingasho ukuthi kukhona okuthize kukho konke ukuthanda njengoba kuhlanganisa iNkathi Yasendulo kanye neNkathi Ephakathi kanye Nesimanje kahle kakhulu.
Lyon inezindawo ezine zomlando, amahektha angama-500 esewonke, amenyezelwe yi-UNESCO Amagugu Omhlaba. Ukuze uzwe umlando wasendulo, wamaRoma kanye nowamaCelt, kufanele uye egqumeni elidala kunawo wonke edolobheni, okuyilapho kusekhona izinsalela zakudala IsiLugdunum, inhlokodolobha yaseGallic.
Nakhu kukhona amanxiwa ezinkundla zemidlalo yaseshashalazini endala, eyodwa kusukela ngekhulu le-10 BC, yakhuliswa ngekhulu le-XNUMX AD, ngamandla abantu abayizinkulungwane eziyi-XNUMX; futhi encane, i-Odeon, kusukela ngekhulu lokuqala AD, ukufundwa komphakathi nokuphindaphindwa. Konke lokhu kungafundwa kufayela le- ILugdunum Museum, eceleni. Ungavakashela futhi I-Notre-Dame de Fourvière Basilica nensimu yama-rose ngaphansi kwegquma lesonto.
Kamuva, phakathi komfula iSaône negquma iFourvière, sithola izinsalela zasendulo nezaseRenaissance. Kusikhumbuza ngokulingana kweLyon, ukushintshana okungapheli kwezebhizinisi okwakukhona lapha, amabhange aseFlemish, amaJalimane nawase-Italy nabathengisi ababehlala noma abadlula lapha. Imayelana ne- IVieux-Leyon noma i-Old Lyon, ngezinsika zalo, amapaseji alo, amaphalazi nezakhiwo zalo ezindala.
Kule ngxenye yedolobha, kufanele vakashela iSt-Jean Cathedral, newashi lezinkanyezi, i- Isonto iSaint Georges, iBandla likaPaul Paul, i amagceke angaphakathi okufihlwe eHhovisi Lezokuvakasha, i ama-traboules ivulekele umphakathi jikelele, kukhona okunye okuvaliwe, neminye iminyuziyamu engakuthakazelisa, njenge ICinema Museum kanye Miniature noma i Imnyuziyamu Yomlando waseLyon.
Kwenye igquma lomuzi, ILa Croix-Rousse, konke okuthinta usilika nokuhweba kwayo kutholakala. Phambilini bekunabasebenzi bakasilika abayizinkulungwane ezingama-30 lapha, abaphotha ngokungaphezi kubo phumlani, okwenza idolobha lingene emlandweni njengendlovukazi kasilika eYurophu. Izakhiwo zilandisa lo msebenzi ngezindlela zazo kanti ezinye zazo zingavakashelwa. Eqinisweni, bewazi ukuthi iHermès ikhiqiza izikhafu zayo zikasilika ezithandwayo lapha?
Ngakho-ke, lapha ukuhambela izindawo zokucobelelana ngolwazi, ama-patio, i Ingadi yeChartreux ebheke emfuleni futhi lapha, amanxiwa amaRoma, lawo omdlalo wezemidlalo iTrois-Gaules. Ngakolunye uhlangothi kukhona ifayela le- UPresq'île, inhliziyo yaseLyon, noma okungenani inhliziyo yakho kanokusho. Umakhelwane uqala eBellecour, isikwele esikhulu sabahamba ngezinyawo, uphele eTown Hall naseMusee de Bellas Artes, ePlaça de Terreaux. Ingcebo yedolobha isesakhiweni ngasinye kule ndawo.
Nayi I-Lyon Opera, iSonto lamaNazaretha iSt-Nizier Church, imigwaqo yezitolo enezitolo ezibizayo, imithombo, izikwele kanye nesonto kuphela laseRoma kuleli dolobha, iBasilica St Martin de Ainay. Konke lokhu maqondana nalokho umuntu okufanele akuvakashele lapho ehambahamba lapha, Kepha yimiphi imisebenzi engenziwa eLyon?
I-Podemos vakashela iBotanical Garden yaseLyon, iParc de Hauteurs, imithambeka yaseRhône, uzitotose kancane kufayela le- I-Spa Lyon Plage, kukhulu, gibela i-segway noma ibhayisikili kagesiYilokho iLyon Bike Tour eyenzelwe khona, kungaba ku-tuk-tuk noma ku-Volkswagen kombi yakudala.
Futhi lapho kuhwalala futhi sifuna ukuphuma siyodla isidlo sakusihlwa sihambe kancane, awu, kufanele wazi ukuthi kufanele ukujoyina amabutho: ILyon inezakhiwo ezingaphezu kwezi-300 zezimpawu ezikhanyayo unyaka wonke. Ngaphezu kwalokho, kuya ngesizini kukhona imicimbi yamasiko, imidanso, amakhonsathi, imikhosi. Isibonelo, ngoMeyi kuneSound Nights, yomculo we-elekthronikhi, noma iFourvière Nights ngoJulayi, enkundleni yemidlalo yaseGallo-Roman ...
Futhi uma sikhuluma ngokudla, njengoba sishilo ekuqaleni, i-gastronomy kaLyon ingenye yezintelezi zayo. Kusukela ngo-1935 ubephethe isicoco sokuthi «Inhlokodolobha yomhlaba ye-gastronomy» ngakho-ke kunezindawo zokudlela ezingenakubalwa, kulinganiselwa ukuthi zingaphezu kwezinkulungwane ezine nangazo zonke izinhlobo. Okusho ukuthi, kusuka ezindaweni zokudlela ezisezingeni eliphakeme kuya ekudleni okusheshayo noma ngaphezulu impilo. Udlani? Inyama yenkomo, inkukhu, ushizi, inhlanzi echibini, izithelo zasentabeni, inyama yomdlalo kanye nohlu lwewayini lekhwalithi enhle kakhulu neyaziwayo.
Ekugcineni, Ungafika kanjani eLyon? I-Fácil: kusuka eParis kukhona isitimela noma ibhasi. Okufanayo kusuka kwamanye amadolobha aseYurophu afana neBarcelona, ​​iLondon, iMilan, iGeneva ... Uma usungaphakathi kwedolobha ungahamba ngebhasi, itekisi noma ibhayisikili. Uma ukhetha ukuhambisa imoto ziningi izindawo zokupaka. Futhi-ke kukhona tram yaseRhônexpress exhuma iLyon Part-Dieu nesikhumulo sezindiza saseLyon Saint-Exupéry engxenyeni yehora.
Uma ungomunye walabo abathenga amakhadi ezokuvakasha edolobheni, unenhlanhla ngoba nakhu elilodwa: the ILyon City Card evula iminyango eminyuziyamu engama-22 ebaluleke kakhulu edolobheni, inikeza ezinye izaphulelo nokusetshenziswa kwamahhala kwebhasi, imetro, i-funicular kanye ne-tram. Kunezinsuku eziyi-1, 2, 3 no-4 zokusebenza.
Futhi kuthiwani I-WIFI Ye-inthanethi? Yebo, uma unekhadi lezivakashi, uthola isaphulelo esingu-50% ekuxhumekeni kwe- I-Hippocketwifi engatholakala eTourism Pavilion ePlace Bellecour. Njengoba ubona, uLyon ulinde ukuthi umthole.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » EFrance » Yini ongayibona eLyon